Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay dagaal maanta ka dhacay degaanka Xoosh ee degmada Dharkeynleey.
Dadkan dagaalka ku dhintay ayaa u badnaa dhinacyada ku dagaalamaya waxaana kale oo ku dhaawacmay 7 qof, waxaana uu socday muddo 4 sacaadood ah.
Dagaalka ayaa bilawday wax yar uun kadib markii maanta oo Jimce ah la tukaday salaadii subax ee xiliga Muqdisho markaas oo ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan ururka al shabaab fariisimo ay ciidamada milatariga DKMG ku lahaayeen deegaanka Xoosh ee dagmada Dharkenleey
Intii uu soconayay dagaalku waxa ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka fudud iyo kan culus intaba, iyadoo daryanka rasaasta culus iyo madaafiicdana laga maqlayay inta badan deegaanada ku dhaw dhaw goobta uu dagaalku ka soconayay.
Dhinaca kale ,dagaalkii saakay ka dhacay dagmada Dharkenleey ayaa waxaa guulo ka kala sheegtay saraakiisha Al Shabaab iyo kuwa DKMG ah iyadoo dhinac walba uu sheeganayo in uu isaga libinta dagaalka la hoyday
Wakiilka al shabaab ee gobolka banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo qadka taleefanka saxaafada shir jaraa'id ugu qabtay ayaa sheegay in dhinacooda ay dagaalki saakay dhacay ka gaareen guulo wax ku ool ah .
Sidoo kale abaanduulaha ciidamada milatariga DKMG ee dagmada Dharkenleey Maxamed Cali Weheliye oo isaguna saxaafada la hadlay ayaa qeexay in ay iska caabbiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen saakay kooxda al shabaab isla markaana ay ka dileen ilaa 18 qof .
Si kastaba ha ahaatee dagaalkii saakay ka dhacay dagmada Dharkenleey ayaa ahaa midkii ugu cuslaa ee mudooyinkan ka dhaca halkaasi, waxana jirta in dagaalkan uu wal wal iyo cabsi aad u badan ku abuuray dadka ku dhaqan dagmadaasi oo iyagu u badan dad halkaasi ku soo barakacay, waxana sidoo kale dagaalkani mudadii uu soconayay uu hakad galiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee deegaanadaasi .
Dhinaca kale ,dagaalkii saakay ka dhacay dagmada Dharkenleey ayaa waxaa guulo ka kala sheegtay saraakiisha Al Shabaab iyo kuwa DKMG ah iyadoo dhinac walba uu sheeganayo in uu isaga libinta dagaalka la hoyday Wakiilka al shabaab ee gobolka banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo qadka taleefanka saxaafada shir jaraa'id ugu qabtay ayaa sheegay in dhinacooda ay dagaalki saakay dhacay ka gaareen guulo wax ku ool ah .
Sidoo kale abaanduulaha ciidamada milatariga DKMG ee dagmada Dharkenleey Maxamed Cali Weheliye oo isaguna saxaafada la hadlay ayaa qeexay in ay iska caabbiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen saakay kooxda al shabaab isla markaana ay ka dileen ilaa 18 qof . Si kastaba ha ahaatee dagaalkii saakay ka dhacay dagmada Dharkenleey ayaa ahaa midkii ugu cuslaa ee mudooyinkan ka dhaca halkaasi, waxana jirta in dagaalkan uu wal wal iyo cabsi aad u badan ku abuuray dadka ku dhaqan dagmadaasi oo iyagu u badan dad halkaasi ku soo barakacay, waxana sidoo kale dagaalkani mudadii uu soconayay uu hakad galiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee deegaanadaasi .